Jurassic Treasures - Myanmar Sports
🎁 JURASSIC TREASURES 🎁
💰 € 20,000 ( ယူရို ၂၀,၀၀၀ ) အထိ ရရှိနိုင်မယ့် Jurassic Treasures ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ် 💰
Jurassic Treasures ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ကစားပြီး € 20,000 ( ယူရို ၂၀,၀၀၀
) ဆုကြေးကြီးထဲက တစ်ခုကို အခုချက်ချင်းပဲ ကံစမ်းရယူလိုက်ပါ။
🕡 ပရိုမိုးရှင်းကာလ 🕡 ( 26. 05. 2022 – 03. 06. 2022 )
အချိန်ကာလကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၃၁ မိနစ် ( 26 May 2022 00:01 GMT ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၂၉ မိနစ် ( 03 June 2022 23:59 GMT ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
🏆 အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမည့် ဆုကြေးများ 🏆
ဆုကြေးများ ( Jurassic Treasures ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ပထမဆု – € 5,000 ( ယူရို ၅,၀၀၀ )
ဒုတိယဆု – € 3,500 ( ယူရို ၃,၅၀၀ )
တတိယဆု – € 2,500 ( ယူရို ၂,၅၀၀ )
စတုတ္ထဆု – € 1,500 ( ယူရို ၁,၅၀၀ )
ပဥ္စမဆု – € 1,000 ( ယူရို ၁,၀၀၀ )
ဆဌမဆု – € 800 ( ယူရို ၈၀၀ )
သတ္တမဆု – € 700 ( ယူရို ၇၀၀ )
၈ ကနေ ၁၅ နေရာ – € 500 ( ယူရို ၅၀၀ )
၁၆ ကနေ ၂၀ နေရာ – € 200 ( ယူရို ၂၀၀ )
Qualifying 1xBet “ Jurassic Treasures ” games: အကျုံးဝင်တဲ့ ဂိမ်းတွေကတော့ –
Dragon’s Luck – အစရှိတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာ ဆော့လို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဂိမ်းတွင်းတူးလ် သတ်မှတ်ချက် – သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာ ကစားပြီး € 1 ( ၁ ယူရို ) နိုင်တိုင်း ၁၀၀ မှတ် ( 100 points ) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကမ်းလှမ်းချက်မှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်လို့ရနိုင်မလဲ?
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် ( 1x Bet Jurassic Treasures promotion ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( Jurassic promotion 1xbet ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
၈။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( 1xbet treasures Promotion ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
၁၀။ 1xBet သည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နှင့်မဆို ကတ်စတန်မာများ၏ ငွေသွင်းငွေထုတ်မှတ်တမ်းများနှင့် (Log in) လော့ဂ်အင် မှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်သုံး သပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့သို့ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးနောက် ကတ်စတန်မာတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသော ကတ်စတန်မာများက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြင့် ကစားသည့် နည်းလမ်း မမှန်မကန်လုပ်သည်ဟု 1xBet မှ စုံစမ်းတွေ့ရှိပါက 1xBet သည် ထိုကဲ့သို့သော ကတ်စတန်မာများ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet Monthly promotion ) အတွက် ရပိုင်ခွင့်များကို ရုတ်သိမ်းပြီး ဘောနပ်စ် ( bonus casino 1xbet ) များကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၂။ ပြိုင်ပွဲ၏ စည်းမျဉ်းများ ( rules of offer 1xbet ) ကို ပြောင်းလဲရန်၊ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်မရွေး ဆိုင်းငံ့ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
အရင်ပုံမှန်ရနေကျ ဘောနပ်စ်တွေတုန်းကလို မဟုတ်ပဲ ဆုကြေးတွေကို ထုတ်ယူဖို့ ဘယ်လောင်းကစားမှ ကစားပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ ချက်ချင်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပရိုမိုးရှင်းပြိုင်ပွဲလေး ( Red Tiger Tournament 1xBet ) က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာမို့လို့ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး ဆုကြေးတွေကို ရယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။